Ogaden News Agency (ONA) – Mareykanka oo Laga Xusayo Maalinta Martin Luther King Jr
Mareykanka oo Laga Xusayo Maalinta Martin Luther King Jr
Isniinta 3xaad ee Bisha Janaayo sanadwalba waa maalin fasax ka ah dalka Mareykanka oo lagu xasuusto ninkaa usoo halgamay sinaanta dadka madawga ah oo xuquuq la siman dadka cadaanka ah aan ku lahaan jirin dalka Mreykanka.
Waxyaabaha sida aadka loogu xasuusto waxaa ka mid ah khudbadii uu ka akhriyay socod lagu tagay caasimadda Washington uu loogu magac bixiyay -Waxaan Ku Riyooday ( “I Have a Dream“). Khudbadaa ayaa noqotay mid uu ku cabiray Himiladiisa ku qotonta in dadka madawga ah iyo kuwa cadaanka ah oo siman ay ku wada noolaadan dalka Mareykanka.
14kii October 1964 ayaa waxaa la gudoonsiiyay biladda nabadda (Nobel Peace Price), oo aduunka u aqoonsaday inuu yahay nin u halgamaya qadiyada shacabkiisa si nabad ahna ku doonaya xuquuqdiisa. Wuxuu ahaa nin aad uga soo horjeeda dagaalkii Vietnam ka socday aadna u daneeya shucuubta laga taagroon yahay iyo dadka saboolka ah.
1968kii isagoo qorshaynaya Maalin ay ugu magacdareen Qabsashada Washington DC ee Dadka saboolka ah een waxba haysanin ayaa waxaa lagu toogtay magaalada Memphis ee gobolka Tennessee. Qalaalase balaadhan ayay madawga Mareykanka ka dhigeen meela kala duwan oo dalka ka mid ah. Waxaa dilkiisa ilaa hadda lagu eedeeyaa inay ahayd mu’aamarad ay FBI-da Mareykanka ay ka dambeeyeen, kutub badan ayaana laga qoray arimahaa.
Waxaa xusid mudan in Nasashada Maalinta Martin Luther King la bilaabay 1971, wuxuuna sharci noqday 1986kii. Waxaa loo dhisay taalooyin badan oo lagu xasuusto halyaygan.
Waxay shucuubta caalamka ka siman yihiin in shaqsiga usoo halgama qadiyad caadil ah la xasuusto oo uu noqdo mid facaada dambe ay bidhaansato. Shaqsigaasi ama hagaadho hadafkuu hiigsanayay ama isagoon kaadhin haku dhintee, sida Cumar Mukhtaarkii Libiya, Mahdigii Suudaan ama Sayid Maxamad Cabdille Xassan. Waxaa iyadana hubaal ah inay jireen qaar badan oo kasoo horjeeday halyeeyadan oo la safnaa gumaysiga, gunnana ka qaadanay, hasa ahaatee sida aan aragno taariikhda aduunkana aan ku xusnayn, aakhirana kollayba ay kaga horeyso xisaab adag.